Sawal Media, Author at Sawal Media
Author: Sawal Media
सरकारमा जान आफूहरु आज भने आजै, भोलि भने भोलि नै तयार छौँ : माधव नेपाल
Posted on ५ दिन अगाडी Author : Sawal Media
१ असोज, काठमाडौं – नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एक हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने बताएका छन् । मिनभवनस्थित केन्द्रीय कार्यालय उदघाटन गरेपछि पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिंदै नेपालले सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्रिपरिषदले कहिले पूर्णता दिने भनेर पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नमा उनले भने ‘म प्रधान्मन्त्री भएको भए ठ्याक्कै भनिदिन्थें, आशा गरौं, यो हप्ताभित्र हुने छ […]
Posted on ६ दिन अगाडी Author : Sawal Media
जसरी एउटा डाक्टरले धेरै बिरामीहरुको उपचार गरि आफ्नो पेशा व्यवसाय चलाइरहेको हुन्छ, त्यसैगरि वकिलहरुले कानुनी परामर्श दिदै आफ्नो पेशालाई निरन्तरता दिइरहेका हुन्छन्, इन्जिनियर ,पाइलट,प्राधापकहरुले आफ्नो पेशा गर्दै समाज सेवा गरिरहेका हुन्छन । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि नेपाल सरकारले तोकेको निकायबाट इजाजत पत्र लिएर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् । ऎनले तोकेको जटिल निर्माण कार्य बाहेक रु […]
Posted on १ हप्ता अगाडी Author : Sawal Media
२८ भदौ, एजेन्सी – उत्तर कोरियाले लामो–दूरीमा मारहान्न सक्ने क्रुज मिसाइल परीक्षण गरेको छ । सो मिसाइलले जापानको अधिकांश क्षेत्रलाई निशाना बनाउन सक्ने उत्तर कोरियाको सरकारी सञ्चारमाध्यमले सोमबार बताएको हो । उत्तर कोरियाको सरकारी सञ्चारमाध्यम केसिएनएका अनुसार गएको सप्ताअन्तमा मिसाइल परीक्षण भएको हो । सो मिसाइल १५ सय किलोमिटर पर पुगेको उल्लेख छ । पछिल्लोपटक […]
२८ भदौ, काठमाडौँ – ‘केयरगिभर’का लागि इजरायल जानेहरूको अंग्रेजी भाषा परीक्षा सोमबार (आज) हुँदैछ । परीक्षाका लागि काठमाडौंमा विभिन्न १६ परीक्षा केन्द्र तोकिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ। विभागका अनुसार परीक्षामा सात हजार ९ जना परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन्। विभागका अनुसार परीक्षा दिउँसो १ बजेदेखि हुनेछ। परीक्षा समयावधि १ घन्टाको हुनेछ। भाषा परीक्षा तोकिएका विज्ञ […]
ओखलढुङ्गाको जिप मानेभन्ज्याङमा पल्टियो, १ जनाको मृत्यु, ९ घाइते
२८ भदौ, काठमाडौं – ओखलढुंगाको मानेभन्ज्याङमा जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा अन्य नौ जना घाइते भएका छन्।मानेभन्जयाङ गाउँपालिका–६ हिलेपानीमा आइतबार दिउँसो बा ११ च ५२१० नम्बरको जिप सडकबाट ५० मिटर तल खस्दा एक जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिप सिद्धिचरण नगरपालिका–२ ठूलाछापको निशंखेबाट यात्रु लिएर काठमाडौँ जाँदै थियो। दुर्घटनामा […]
सभामुखको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक बस्दै, को–कोलाई गरियो निम्तो
२८ भदौ, काठमाडौं – सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक आज बस्दैछ । एमालेले बारम्बार प्रतिनिधिसभा अवरोध जारी राखेपछि सहमति जुटाउनका लागि सभामुख सापकोटाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको हो । दिउँसो साढे २ बजे बैठक संसद भवनको ल्होत्से हलमा बस्दै छ । सर्वदलीय बैठकमा संसदमा जारी गतिरोध अन्त्य लगायतका महत्वपूर्ण समसामयिक विषयमा केन्द्रीत रहने सभामुख […]
श्रीलङ्कामा किन खाद्य सामग्री सङ्कट छ ?
२८ भदौ, एजेन्सी – श्रीलङ्काका सरकारी खाद्य सामग्री पसलहरू रित्तिँदै गएका छन् भने धुलो दूध, अन्न र चामल जस्ता आयातित सामग्रीको सञ्चिति निकै कम छ । सरकारले आपूर्ति अभाव नरहेको भन्दै सञ्चारमाध्यमहरूले भय निम्त्याएको आरोप लगाएको छ। सरकारले सङ्कटकालको घोषणा गरेको र विदेशी मुद्रा सटहीमा सङ्कट देखा परिरहेको अवस्थामा श्रीलङ्काको केन्द्रीय ब्याङ्कका प्रमुखले राजीनामा दिएको […]
फेवातालको २५ सय रोपनी जमिन व्यक्तिको नाममा !
२६ भदौ, काठमाडौं – पटक–पटक समाचार आउँछ– फेवातालको पानीमुनिको जमिन पनि व्यक्तिका नाममा। तर, व्यक्तिका नाममा बनेको जग्गाधनी पुर्जा खारेज भएर फेवाताल वा सरकारका नाममा आएको छैन। यहाँ दुई प्रश्न उब्जिन्छ– एक, पानीमुनिको जमिन व्यक्तिका नाममा कसरी दर्ता भयो ? दुई, त्यस्तो दर्ता खारेज किन भएन ? पहिला दोस्रो प्रश्नको उत्तर खोजौं। तालको क्षेत्रफलभित्र पर्ने […]
२७ भदौ, बैतडी – यहाँका स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालमा भाइरल ज्वरो र मौसमी रुघाखोकीका बिरामीको सङ्ख्या बढेको छ । लगातारको वर्षा तथा मौसम परिवर्तन भएसँगै यहाँ भाइरल ज्वरो र मौसमी रुघाखोकीका बिरामी बढेका स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । जिल्ला अस्पतालमा हाल एक सयको हाराहारीमा बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । त्यसमध्ये आधा जतिमा भाइरल ज्वरो […]
Posted on २ हप्ता अगाडी Author : Sawal Media
भदौ २२,ललितपुर-ललितपुर महानगरपालिकाले यहाँ कार्यरत नगरप्रहरीलाई नेपाल अर्थात् नेवारी भाषामा प्रशिक्षण दिन थालेको छ । महानगरपालिकामा धेरैजसो नेवारी समुदायको बसोबास रहँदा प्रहरीलाई काममा उक्त भाषाले सहजता तुल्याउने ठहर गरी दुई साताको प्रशिक्षण दिन थालिएको हो । नगरप्रहरीप्रमुख सीताराम हाछेथूले महानगरको नेवारी बस्तीमा नेपालभाषा प्रयोग गरेर काम गर्दा अपनत्वको व्यवहार पाएसँगै उक्त भाषा जान्न अति नै […]
सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूतलाई बोलायो फिर्ता
सांसद लिङ्देनको सुझावः जनतालाई सुशासन दिनुस्
लुम्बिनी प्रदेश राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा नेपालगञ्जका मेयरले मतदान नगर्ने